Wafdi ka socda Guddiga Doorashooyinka heer Federaal oo ku wajahan Kismaayo | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Wafdi ka socda Guddiga Doorashooyinka heer Federaal oo ku wajahan Kismaayo
Guddiga hirgalinta doorashooyinka heer Federaal ee FEIT ayaa Maanta waxaa ay ku wajahan yihiin Magaalada Kismaayo ee Caasimadda KMG-ka ah ee Maamulka Jubbaland, iyagoo ka ambabaxaya Magaalada Muqdisho.
Wafdiga Guddiga doorashooyinka heer Federaal ayaa waxaa hoggaaminaya Guddoomiyaha Guddigaas Maxamed Xasan Cirro, waxaana socdaalka ku wehlin doona xubno ka tirsan Guddiga oo saacadaha soo socda tegi doona Kismaayo.
Ujeedka Guddiga doorashooyinka FEIT ayaa waxaa uu yahay dardar-galinta qabsoomidda doorashada Xildhibaanada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliy oo la filayo inay ka bilaabato Magaalada Kismaayo.
Guddiga dooraahada heer dowlad Goboleed ee Jubbaland ayaa dhawaan sheegay in doorashada Xubnaha Aqalka sare ku qabanayaan waqtigii loo qorsheeyay oo aheyd 25-ka bishan oo maalinta berri ku beegsan, isla markaana ay u diyaar u yihiin qabashada doorashada.
Maqaal horeIsrasaaseyn ka dhacday Magaalada Muqdisho iyo khasaaro ka dhashay
Maqaal XigaRW Rooble iyo Golaha Wadatashiga Qaranka oo kulan yeeshay, kadib dib u dhac ku yimid doorashada Aqalka sare